महिनाको लाख लाख का बिटा कमाउने सोचमा..................
१२ को exam दियर रिजलटको पर्खाइ मा हुने भाइ बहिनि को सम्बाद:
Ø साले!! के गर्दै छस हँ? टाइम पास कसरि गर्छस/ गर्छेस?
म त IELTS (Internationale English Language Testing System) गर्दै छु ।
Ø होर म त TOEFL (Test Of English asaForeign Language) गर्दै छु । य होर कहाँ गर्दै छस त ?
कहाँ हुनु नि पुतलिसडक तिर त हो नि , ११ देखि १ सम्म त IELTS को क्लास छ, साढे १ देखि hardware को क्लास छ। टाइम पास भइरहछ। next season को लागि try गर्नु पर्ला।
Ø ये होर हेर्न म नि IELTS गर्ने भनेको उता मेरो दिदि ( मामा को छोरि) TOEFL गर भन्नु भो त्यसैले।
Bachelor र master गरि सकेका कुरा .
के भुल गरेछु
हिन्दि फिल्म मा नाना पाटेकर को dialogue याद आयो,
"EK MACHHAR AADMI KO HIJDA BANA DETA HAI" हुनत मइले यसो लेख्दा तपाइ ले भन्न सक्नुहुन्छ "How many teeth doesamosquito have?"
तर मेरो कुरा यो भन्दा अलि भिन्न छ।
कति कमजोर रहेछन मेरा हात हरु तेरो खप्पर फोर्ने सकिन
बत्ति गएको छ आज मेरो काठमान्डौ मा ए साच्चि मेरो होइने हाम्रो किन किन बत्ति मुनि अध्यारो त मेरो मात्र होइन हामो सबैको साझा (गिदि) problem हो नि।
तर केहि छैन यहि बत्ति नभएको मौका मा म केहि लेख्न त खोजिरहेकी छु। यसो घर को बाहिर हेरेको त पल्लो घरकि भर्खेरै १२ पददै गरेको बहिनि र उनका २ जना small sis हरु English गितमा नाच्दै पो रहेछन, अनि त्यहि घरको बिचको तलामा भर्खरै ३-४ भो होला कोठा सरि आएका १ परिवार लुडो खेल्दै छ ।
पल्लो घरको परिवार मा १ जना केटो पनि छ। मेरो र त्यो केटो को आखाँ जुदाजुद हुन खोज्छ तर त्यो लजाउँछ र भित्र पस्छ, त्यसको FZ (lord of road) बाइक पनि रैछ। जब म मेरो स्कुटि start गर्छु तब त्यो केटो पनि आफ्नो बाइक मेरो पछि पछि लिएर चोक सम्म त आउँछ
फेसबुक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल
मइले फेसबुक मा भेटेका केहि रमाईला fan page र group हरु
"मलाई बामदेव भन्दा रामदेव प्यारो लाग्छ" ,
"मलाई प्रचण्ड भन्दा कालो कुकुर मन पर्छ",
:"भाउ खोज्ने केटि लाइ बाल छैन" ,
"तेरो स्वास्नी क्या च्वाक छ यार" ,
"घरकी स्वास्नी दाल बराबर" ,हरे के के नाम ज...ानेका हुन् कुन्नि\_
बाटोमा मुतनेको तुरी काटदेउ
नेपाललाई स्वतन्त्र छोड हस्तछेप नगर
कागलाई केरा पाक्यो हर्स न बिस्मात
मेरो पनि एउटा मिल्ने साथि छ
तलाई एकान्तमा त् भेतुउ न् दुई मिनेट कुतिन छु भने हेर्न!!
बिहानै फेसबुक ,बेलुकै फेसबुक, ससुराली जादाँ ससुराली मै फेसबुक !!!
मलाई दाल,भात,तरकारि,अचार जस्तो मिठो अरु केहि लाग्दैन
नाई !!! जान्न म abroad...
रिमिक्स उखान टुक्का
उखान टुक्काहरुका रिमिक्स
1 न पाउनेले केरा पाको चियामा चोपेर खाको
२ पण्डितको टुप्पी न एन्टिना न एरिएल
३ भन्सारमा सुन छ लिन गए हुन्छ
४ अर्थ न बर्थको पप गीत गाई , घर छ झुपडी घाटीमा टाई
The New Birds & the Bees:
The mystery is gone ... How was I born?
The little boy asks his father, "Daddy, how was I born?"
मलाइ मन परेको कबिता
We all enter this world in the same way
Soaked in blood, screaming and quite bare
But if you live your life in the right way
That kind of thing doesn't have to stop there
Frustrated One sided Lovers' Association
join new group ....................in facbook
"ग्रन्ड डिजाइन "
धन्न नेपाल मा पशुपति नाथ छन् र त देश चलेको रैछ।
हुन त नेपाल लाइ चिनाउने धैरै कुरा छन जस्तै बन्द, हडताल, फोहर, गरिबी तर ति भन्दा पनि अलि
फरक कुरा पनि छन है जस्तै सगरमाथा गौतम बुद्ध अनि पशुपति। हुनत गौतम बुद्ध त हालै
भारत तिर भागे अरे कुन्नि भारत को उत्तारअच्चला मा बसाइ सरे कुनै दिन सगरमाथा पनि चाइना तिर जान्छ अनि बाकि रहन्छ केबल शिब जि । त्यै पनि शिब त सधै G मा
मस्त। माल पाएर चाल नपाउदा
र नेता निदाएपछि नेपाल लाइ failer
म किन नेपाल को प्रधामंत्री हुने के त्यस्तो गुण छ म मा,
म नेपाल आलु पाटि सित सम्बध राख्छु ।
मेरो पहिलो agenda भनेको नै हाम्रो पिर्य आलुको दाम १
रुपैया प्रति किलो गर्ने हो, २:) नेपालि आलु लाइ विश्व भरि चिनाउने
३:)नअघाउन जेल मजाल्ले पहिला आफै आलु को नाम मा ७ पुस्ता लाइ पुग्ने गरि Swiss bank पैसा राख्ने पछि अलिअलि
म, डा. बाबुराम र फेसबुक
म बाहिर ‍‌बस्दा नेपाल मा माओबादी हरुको सरकार थियो । त्यतिखेर डा. बाबुराम नेपालका पैसा (अर्थ) मत्री थिय र आम मान्छेको हरु उनिसित अलि बढि नै आशावादी थीए। मैले यतिखेर उनेले
कति राम्रो कति नराम्रो गरे वा यस गरेको भय हुन्थो उसो
विश्वकप २०१० का केही रोचक तथ्यहरु
जोहानसवर्ग- यस पटकको विश्वकपमा सबभन्दा बढी फाउल गर्ने टोली नेदरल्यान्डस् हो भने सबभन्दा कम फाउल खेल्ने उत्तर कोरिया हो। फाउलबाट सबैभन्दा बढी सताइएको टोली स्पेन हो। एक मात्र अपराजित टोली न्युजिल्यान्ड रह्यो। विश्वकप २०१० का केही रोचक तथ्यहरु-
मिशिला राम्रो कि मिशुला???
म बल्ग चलाउन भर्खरै सिक्दै छु मतलब म सिकारु हु भन्दा word लाई justice होला भन्नु पर्छ । के बाट सुरु गरु भन्ने कुरा सोचि राखेको बेलामा आफ्नै बारेमा केहि गफ दिन मन लाग्यो। हुनत हामी सबैलाइ आफ्नो तारिफ गरेको खुबै मज्जा
लाग्छ। म पनि आफ्नो कमेन्ट गरेको खुबै मन पराऊँछु।
कुरा लाइ न बड्गाइ सिधै bamboo भाषा
गूगल को बारेमा केहि जान्ने हो कि.........
गूगलको मुख्य पृष्ठको अति सरल स्वरुप र द्रुत स्वभावका फलस्वरुप यसले ठूलो भिडलाई आकर्षण गर्न सक्षम भएको छ ।
गूगल (अङ्ग्रेजी: Google) एक खोज यन्त्र हो जसको मालिक गूगल निगमको मिसन स्टेटमन्ट यस्तो छ - "संसारको जानकारी संगठित गरेर विश्वव्यापि पहुँच र फाइदाजनक बनाउनु" । वेबको सबैभन्दा ठूलो खोज यन्त्र, गूगलले दैनिक २० करोड जिज्ञासा आफ्ना बिभिन्न सेवाहरुमार्फत प्राप्त गर्छ ।
वेबपेज खोज्ने औजारको अतिरिक्त, गूगलले दृस्य, युजनेट न्युजग्रुप, समाचार वेबसाइट, श्रव्यदृस्य, बिक्रियोग्य सामान, नक्सा वा स्थानका आधारमा खोज्ने सेवा प्रदान गर्दछ । फेब्रुअरि २००५ सम्मको तथ्याङ्कमा, गूगलले ८.०५ अर्ब वेबपेजहरु, एक अर्ब भन्दा बढी चित्रहरु, र ८४.५ करोड युजनेट सन्देश — समष्टिमा, ९.५ अर्ब बस्तुहरु समाबेस गरिसकेको छ । यसले धेरैजसो अनुक्रमणित सामाग्रीहरुको छायाँप्रति (Cache) राख्दछ । गूगलले गूगल समाचार, गूगल सल्लाह, फ्रुगल, र गूगल डेक्सटप खोजी जस्ता अन्य औजार र सेवाहरु पनि सञ्चालन गर्दछ
कम्प्युटर लगायत सूचना प्रविधिमा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नका लागी तयार गरिएको देवनागरी लिपि र अन्य सफ्टवेयरहरूलाई समष्टिमा नेपाली युनिकोड भनिन्छ।
ब्लगलाई अनलाइन डायरीको लिइन्छ । आफुलाई लागेको कुरा लेखेर सुचनाको साजालमा पठाउनका लागि ब्लग अहिले विश्वमा नै चर्चित बन्दै गएको छ ।
नेपालको परिप्रेक्षमा ब्लगको शुरुवात कहिलेवाट भयो भन्ने एकिन इतिहास छैन । तर २०६१ माघ १९ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक कु गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नेपालमा बैकल्पीक साचारमाध्ययमको रुपमा ब्लग देखिएको हो ।
राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सम्पुर्ण साचार माध्ययमलाइ नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भयो । यसको सांकेतिक विरोध गर्दै मुलधारको पत्रकारीतामा संलग्न रहेका युवाहरु पत्रकारहरुले नेपालामा ब्लगिङ्गलाई प्रवेश गराएका हुन् ।
हुन पनि क्रुर र तानाशाही सरकारको कारण राजाको सक्रियतामा ब्लग निक्कै चर्चामा आएको थियो। मुलधारको पत्रिकाको तुलनामा ब्लग सबैको समाचारको माध्यम बन्न सफल भएको थियो ।
नेपालमा चर्चामा रहेको ब्लगमा युडब्लु वि अगाडि रहेको छ । यो अंग्रेजी भाषामा रहेको छ । नेपाली भाषाको ब्लगहरु हेर्ने हो भने माइसंसार डटकम र हाम्रोब्लग डटकम अगाडि देखिएका छन् । अहिले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका लागि अभ्यास भइरहेको बेलामा पनि ब्लग सेलाएको छैन । सबैले आ-आफ्नो तर्फवाट ब्लग मार्फत नेयां नेपालको निर्माणमा योगदान पुर्याइरहेका छन् । ब्लगको संख्या हेर्ने हो भने पनि अहिले ह्वात्तै बढेर गएको छ । अहिले करिव एक सयको हाराहारीमा नेपाली ब्लगहरु संचालनमा रहेका पाइन्छ ।
के हो ब्लग
महिनाको लाख लाख का बिटा कमाउने सोचमा.................
कति कमजोर रहेछन मेरा हात हरु तेरो खप्पर फोर्ने सकि...
म किन नेपाल को प्रधामंत्री हुने के त्यस्तो गुण छ म...